अष्ट्रेलियामा प्रमोद दवाडीको सक्रियता ! अष्ट्रेलियाको क्वीन्सल्यान्ड राज्य समन्वय समितिको सहसंयोजकमा उम्मेदवारी::Nepal's Online News Portal
अष्ट्रेलियामा प्रमोद दवाडीको सक्रियता ! अष्ट्रेलियाको क्वीन्सल्यान्ड राज्य समन्वय समितिको सहसंयोजकमा उम्मेदवारी
चितवन । एनआरएनए अष्ट्रेलियाको क्वीन्सल्यान्ड राज्य समन्वय समितिको सहसंयोजकमा चितवनका प्रमोद दवाडीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको आगामी जुलाईमा हुन गैरहेको निर्वाचनमा ुक्वीन्सल्यान्ड राज्य समन्वय समितीको सहसंयोजकको पदमा उम्मेद्वारी दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
भरतपुर ११ गोर्खाली टोल निवासी दवाडीले यसअघि अष्ट्रेलिया र नेपालका विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर काम गरेका थिए । उहाँले २०१७ र २०१९ मा एनआरएनए अष्ट्रेलियाको राज्य समन्वय समितिमा रहेर कार्यसम्पादन गर्नुभएको छ ।
संस्थाप्रतिको माया र जिम्मेवारी महसुस गर्दै सामाजिक सोच र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । सबैको साथ र सहयोगबाट ६ जुलाई, २०१९ मा हुने निर्वाचनमा उहाँले जित्ने विश्वास गर्नुभएको छ ।